Janankii Jwxo shiilay, oo Jubba Jaakad u Qaatay! – Rasaasa News
Mar 26, 2011 ay dhawaan dawlad gabaleed u samaysay gabalada koonfureed ee Jamhuuriyada Somaliya, Cidhib Xumada Kooxda Jwxo-shiil iyo Calan Badalashadooda, ee London., Ma maqasheen in kooxda Jwxo-shiil, madaxweynana uga dhigtay Maxamed Xasan Cabdi [kilaas], oo ahaa gudoomiyaha Jaaliyada Jwxo-shiil
“Jabkii Jwxo nin joogay oo Jubba Jaakad u qaatay, jahwareer badanaa.” Ma maqasheen in kooxda Jwxo-shiil, ay dhawaan dawlad gabaleed u samaysay gabalada koonfureed ee Jamhuuriyada Somaliya, madaxweynana uga dhigtay Maxamed Xasan Cabdi [kilaas], oo ahaa gudoomiyaha Jaaliyada Jwxo-shiil, ee London.
Shir ay kooxda Jwxo-shiil, bishan March 23, 2011 ku qabatay xaafada South hall ee magaalada London, dalka Ingriiska, ayey dawlad gabaleed lagu magacaabo Jubbaland ku dhistay.
Shirka lagu dhisay dawlad gabaleedka Jubbaland, waxaa laga siidaayey TV uu leeyahay ururka Al shabaab oo lagu magacaabo ‘Somali chanel’ saldhigiisuna yahay London. Ma jirto saxaafad kale oo baahisay ama wax ka qortay shirka lagu dhisay dawlad gabaleedka Jubbaland.
Dadka ka qayb galay shirka kuligood waxay ahaayeen xubnaha iyo taageerayaasha kooxda Jwxo-shiil, waxaana madaxweyne laga dhigay gudoomiyaha Jaaliyada Jwxo-shiil, ee London, Maxamed Cabdi-nuur [kilaas].
Gudoomiyaha Jaaliyada Jwxo-shiil, ahna madaxweynaha dawlada gabaleedka Jubbaland, waa nin Kenyan ah oo reer Garrissa ah, oo aan waligii tagin Somaliya iyo Itobiya midna.
Waxay dadka ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya, aad ula yaabeen jahwareerka haysta kooxda Jwxo-shiil, oo haatan ah haad geed waayey.
Waxay hore kooxda Jwxo-shiil, dagaalo uga riday tuulada Bulay, oo ka tirsan magaalada Dhoobley ee dalka Somaliya. Xiligaas oo ay dadku markii ugu horaysay fahmeen in Janan Jwxo-shiil, uu ku jahawareeray, siyaasada gobanimo doonka ururka ONLF.
Jahawareerkaas, oo u horseeday in uu hadh cad dilo masuuliyiintii ugu saraysay ururka ONLF, ee haysay hogaanka siyaasada ururka.
Jananka, oo hada ku nool dalka Eritrea arimo khuseeya amaankiisa dartood, ma mudna in lagula yaabo dhismaha dawlad gabaleedka Jubbaland.
Haduu Eebe idmo, waxaanu dhawaan idiin soo dayn doonaa xunaha uu u magacaabay maamulka dawlad gabaleedka Jubbaland ee Somaliya.